आरा ! रारामा तीन बर्षपछि मनाङ र सहारा फेरी फाइनलमा भिड्दै | Hamro Khelkud
आरा ! रारामा तीन बर्षपछि मनाङ र सहारा फेरी फाइनलमा भिड्दै
पोखरा (हाम्रो खेलकुद)– लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मस्याङ्दी क्लब आहा रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा अरु भन्दा फरक इतिहास बनाइसकेको टोली हो । २०५८ मा पहिलो पटक क्याराभान गोल्ड कप र त्यसपछि आहा रारा गोल्डकपको नाममा आयोजित फुटबल प्रतियोगितामा सर्वाधिक फाइनल खेल्ने टोली मनाङ हो ।
आहा रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलको एक दिन अघि शुक्रबार उपाधिका साथ दायाँबाट क्रमशः सहाराका कप्तान उत्तम गुरुङ, प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठ, मनाङका प्रशिक्षक छिरिङ लोप्साङ गुरुङ र कप्तान अनिल गुरुङ । तस्बिर– सुदर्शन रञ्जित
आहा रारामा शनिबार मनाङ दसौं पटक फाइनल खेल्दैछ । त्यसपछि सर्वाधिक फाइनल खेल्नेमा नेपाल पुलिस क्लबको नाम आउछ । विभागिय टोलीले ८ पटक फाइनल खेलेको छ । क्याराभान समेत जोड्दा पुलिसले ५ पटक उपाधि जितेको छ भने मनाङ र रुस्लान थ्री स्टारले समान ४ पटक आहा राराको उपाधि जितेका छन् । यी तीन टोलीबाहेक आहा रारा गोल्डकप जित्नेमा आयोजक सहारा र अफ्रिकन युनाइटेड मात्र छन् ।
आहामा अहिले सम्म १० टोलीले मात्र फाइनल खेलेका छन् । मनाङ, पुलिसपछि थ्री स्टारको नम्बर आउँछ । ४ पटक फाइनल खेलको थ्री स्टार चारै पटक च्याम्पियन बनेर फर्केको छ । त्यस्तै अर्को विभागिय टोली आर्मी र शनिबारको खेलपछि सहाराको समान ३ वटा फाइनल खेलेको अनुवभ हुनेछ । त्यसबाहेक एपिएफ, अफ्रिकन युनाइटेड, जावलाखेल युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लबले एक एक पटक फाइनल खेलेका छन् ।
१५ औं आहा रारा गोल्डकपका आइपुग्दा तीन बर्षअघिको कथा दोहोरिएको छ । फेरी एक पटक मनाङ र आयोजक सहारा फाइनलमा भिड्ने तयारीमा छन् । २०७० मा मनाङलाई १–० ले स्तब्ध पार्दै सहारा पहिलो पटक च्याम्पियन बनेको थियो । त्यसयता सहारा पहिलो पटक फाइनल खेल्दैछ । २०६८ मा पहिलो पटक फाइनल खेल्दा सहारालाई थ्री स्टारले १–० ले हराएको थियो । साविक विजेता समेत रहेको मनाङ उपाधि रक्षा गर्ने अभियानमा हुँदा सहारा मनाङविरुद्धको इतिहासलाई निरन्तरता दिने पक्षमा हुनेछ । मनाङले फाइनल जितेमा अर्को इतिहास रच्ने छ । त्यो अवस्थामा टोलीले पाँचौं पटक उपाधि जित्ने छ । आहा रारा गोल्डकप जित्ने मनाङ पहिलो टोली हुनेछ । पुलिसले क्याराभान र ४ पटक आहा रारा जितेको थियो ।
सहाराले पहिलो खेलबाहेक संघर्षपूर्ण जितका साथ फाइनलको यात्रा तय गरेको थियो । मनाङको पनि सेमिफाइनल कठिन रह्यो । त्यसैले दुवै फाइनलका लागि पनि पक्कै सचेत भएर उत्रनेछन् । फाइनलको एक दिन अघि पोखरा रंगशालामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुवै टोलीका प्रशिक्षक र कप्तानले उपाधि जित्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
मनाङका प्रशिक्षक छिरिङ लोप्साङ गुरुङले राष्ट्रिय टोलीका स्टार खेलाडी रहेकाले पनि त्यसलाई जितको आधारमा मानेका छन् । उनले भने ‘विपक्षी टिम राम्रै छ । हाम्रो अहिले टिम सेट नै बलियो छ । राष्ट्रिय खेलाडी पनि धेरै छ । त्यसैले उपाधि जित्नेमा आशावादी छौं ।’ मनाङका कप्तान अनिल अनील गुरुङले फाइनलका लागि दबाब नरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रेसर खासै छैन । फाइनललाई जित्ने गरि खेल्नुपर्छ । त्यो दिन जसले राम्रो खेल्छ उसले जित्छ ।’
सहाराका प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले मनाङ बलियो टोली भएकाले त्यस्तो टोलीविरुद्ध रणनीति पनि त्यहि अनुरुपको बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘घरेलु मैदानको फाइदा उठाउन हामीलाई छ । तर मनाङसँग अनुभवी राष्ट्रिय खेलाडी छन् । आशा गरौं फाइनल राम्रो हुनेछ ।’ सहाराका कप्तान उत्तम गुरुङले उपाधि जित्नेमा टोली विश्वस्त रहेको बताए ।
पहिलो चरणमा सुदुरपश्चिमलाई ४–१ ले सहजै हराएको सहाराले क्वार्टरफाइनलमा सिक्किम युनाइटेड र सेमिफाइनलमा आर्मीलाई हराउन टाइब्रेकर सम्म कुर्नु परेको थियो । उता क्वार्टरफाइनलमा धरान फुटबल क्लबमाथि ४–१ जित निकालेको मनाङले सेमिफाइनलमा संकटालाई १–० झिनो अन्तरले हराएको थियो ।
यसपटकको फाइनल यात्रा
विरुद्ध सुदूरपश्चिमाञ्चल ४–० पहिलो चरण बाई
विरुद्ध सिक्कि युनाइटेड ०–० (४–२) क्वार्टरफाइनल विरुद्ध धरान ४–१
विरुद्ध आर्मी ० –० (४–३) सेमिफाइनल विरुद्ध संकटा १–०
आहा रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताका विजेता
बर्ष विजेता स्कोर उपविजेता
२०७३ ? ? ?
२०७२ मनाङ १–० आर्मी
२०७१ थ्री स्टार १–० मनाङ
२०७० सहारा १–० मनाङ
२०६९ थ्री स्टार १–० सहारा
२०६८ मनाङ २–० जावलाखेल
२०६७ थ्री स्टार १–० मनाङ
२०६६ पुलिस १ –० आर्मी
२०६५ पुलिस ५–० आर्मी
२०६४ पुलिस २–० एपिएफ
२०६३ थ्री स्टार १ –१ (४–३) मनाङ
२०६२ अफ्रिकन युनाइटेड २–० पुलिस
२०६१ मनाङ ३–२ पुलिस
२०६० मनाङ ३–१ पुलिस
२०५९ पुलिस १–० फ्रेन्ड्स
२०५८ पुलिस २–१ मनाङ (क्याराभान गोल्ड कप )